Mazano akasiiwa nevasingatendi | Stylish Men
Vakaroorana uye Bonde
Mashoko akasiiwa nevasingatendi
Alicia tomero | 27/05/2022 10:00 | Vakaroorana uye Bonde
Zvinoshungurudza uye zvinogumbura kuona kuti pane zvakawanda zvasangana zvinoonekwa uye zvinonongedza mumwe wako haana kutendeka Pamwe angoriwo fungidziro uye zvese kunongedza kumasanga ayo asina chimwezve chizaruro, asi kana patova nevakawanda, zvinhu zvose zvinoratidza kusavimbika. tichasangana rudzii rwezviratidzo izvo vasingatendi vanosiya panoitika zvakadai.
Kuwedzera kwenyaya dzekusavimbika kwawedzera, kungave pakati pemhando ipi neipi yevakaroora kana michato. Zvinhu zvinotsanangura zviitiko izvi zvakasiyana kwazvo, kungave nekuda kwezvikonzero zvetsinga, matambudziko ehunhu, genetics, biological, nezvimwe. Mune chimwe chezvinhu izvi, zvakakosha chete kucherechedza ndezvipi zviratidzo zvakasiiwa nevasingatendi.
1 Masocial network ndiwo anonyanya kukosha
2 nhema dzinopfuurira
4 Zvinoshamisa uye zvisingatarisirwi kubva
5 Paanouya kumba anogeza.
6 Mupfungwa iwe unogara uchifunga nezve chimwe chinhu nguva dzose
7 Shamwari dzake dzinoita sedzinovanza chimwe chinhu
8 Chii chinoitika pabonde?
Masocial network ndiwo anonyanya kukosha
Kusavimbika kwakawanda kunotanga neinternet. Icho chokwadi chekusangana nevanhu vasingazivikanwe zvakanyanya uye nekugadzirisa chakavanzika icho mumwe munhu anochengeta kuseri kweiyo mbiri, inoita. kuwedzera kuda kuziva, ipapo kunouya kusangana uye pakupedzisira zuva.
Kusangana nevanhu vatsva ndiko kurongeka kwezuva nekuda kwekuwanda kwe mawebhusaiti uye maapplication ekuita flirt online. Nharembozha kazhinji ndiyo nzira huru uye kana mumwe wako akada kuhwanda kana kuvharidzira kupinda kwavo, ndipo panopinda chimwe chezvikonzero zvekuitisana nharo.
Mafungiro avangasangana nawo pamusoro pemashandisiro avaimboita nharembozha anozopa pfungwa dzavangave kutamba nevamwe vanhu. Kuenderera mberi kwekushandisa kwemudziyo uyu kunopa zvakawanda zvekutaura nezvazvo, nekuti inogara ichiteerera zviziviso. kunyange nguva dzose iwe uchava nekutonga kwakakwana pamusoro pekuwana kwako kuitira kuti vamwe vanhu vasakwanise kuonana kana kuverenga zvirimo.
Kutarisa, kutarisisa kana chero chokwadi chine chikonzero chinogona kunge chiri nyaya dzisina basa. Chokwadi ndechekuti iyi nhevedzano yezviitiko ivo vanoenderera mberi uye unotanga kubatanidza madotsi uye unoona kuti nguva zhinji havasanganisire.
Zvimwe Hurukuro ngadzitange uye kuti mumwe munhu anoramba chokwadi uye anopomera mudiwa wake kuti ane kudzora zvakanyanya, kupenga uye kunyange godo rakanyanyisa. Kazhinji kana zvikaitika kuti munhu anga asina kutendeka akabatwa, mhinduro inogara yakangwarira, achaita zvakaipa, nehasha uye achatsamwa zvikuru.
Zvinoitika shanduko isingatarisirwi uye nekuchinja kwemufananidzo, anopfeka bvudzi rake zvakatsvinda uye anotoshandisa pefiyumu payainge isati yamboshandiswa, anogona kupa kapfungwa kekuti pane chiri kuitika.
Pamwe ingori shanduko shoma nekuti urikusangana nazvo shanduko yedambudziko riripo uye inoda kuzvigadzirisa. Ingoyedza kuona kuti zviitiko izvi zvinopindirana rinhi uye kuti chii chakaitika masikati nekuti pamwe anga ari padate.
Zvinoshamisa uye zvisingatarisirwi kubva
Idzo dzinobuda dzisina kunaka uye nechikonzero chikuru vanogara vachiita kuti vanhu vataure. Kana paine nhevedzano yezviitiko zvisingachaitike semazuva ese, chatova chimwe chinhu chine mibvunzo yacho. Mafambiro ako asingatarisirwi vane pembedzo nguva dzose, anoti anofanira kutora chimwe chinhu chakakosha, kuita basa uye nguva dzose achiuya nemhinduro dzisina kujeka.
Uyezve, kana iwe uchida kupinda zvakadzama munyaya yacho anowana kudzivirira ndokuti: Handichagoni kuita chinhu here? Handikwanise kubuda? Muzviitiko izvi unogona kutora mukana kutaura izvozvo uchamuperekedza kunoita chimwe chinhu pane imwe nzvimbo iri pedyo, apa uchaona kuti zvinoita sei. Kana akavhiringidzika kana kuvhiringidzika, zvichida imhaka yekuti aizoita chimwe chinhu chaasingadi kuti iwe uzive nezvazvo.
Paanouya kumba anogeza.
Icho chinhu chakajairika. Vanhu vazhinji vasina kutendeka kana vadzoka kubva kunofambidzana nemudiwa wavo vanoedza kugeza kuti vadzime chero tsvakiridzo izvozvo zvinogona kuvapa mhosva. Kana uchifungira chimwe chinhu, tsvaga zvimwe zvingasara, sepahembe dzake. Iwe unogona kuwana sampuli dzeimwe pefiyumu uye kunyange diki risingatarisirwe tsvina.
Mupfungwa iwe unogara uchifunga nezve chimwe chinhu nguva dzose
Zviri nani kuti usamhanyira kumhedziso, asi chimwe chinhu chiri mumusoro make uye izvo zvinoita kuti ave nemusoro wake kune imwe nzvimbo. Ichi hachisi chiratidzo chakanaka kana akasakutsanangurira zvaari kufunga uye iwe uchinyatsomutarisa sekunge Ndakanga ndarasika mune imwe pfungwa isinganzwisisike.
Shamwari dzake dzinoita sedzinovanza chimwe chinhu
kana mukagara muboka hapasisina kuti vibration yanga iripo. Dzimwe nguva mamiriro ezvinhu anova akaoma uye kunyarara kunofungirwa kunogadzirwa. Zvinoita sekuti haugone kuvapo panguva iyoyo nekuti zvinosvika pakunetsa. Mune ino kesi hapana chinogona kuitwa, haugone kugadzira chiitiko uye kuva paranoid, asi iwe uchafanirwa kuita sekunge hapana chakaitika.
Chii chinoitika pabonde?
Zvichida panguva ino pane dzidziso mbiri dzakasiyana. Maitiro acho anowanzo siyana, asi chinowanzoitika ndechekuti bonde rinodzikira muhuwandu hwenguva. Vamwe vanhu havangofungi kuti bonde rinoderera, asi nenzira yarinokura nayo. Chii chingaitika? Kuti munhu ane zvimwe zvinomunetsa uye zvaanoda zvaasina kumbove nazvo uye angatoratidza kuwedzera libido kana kuderera kukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kukodzera » Vakaroorana uye Bonde » Mashoko akasiiwa nevasingatendi
Maitiro ekunamira ganda kune tsandanyama
Kana murume asingakude anoita sei?
Tora nhau dzichangoburwa pamafashoni evarume nemararamiro muemail yako.